Isilayidi esigqibeleleyo somvelisi kunye neFektri | IPuyang
Intshayelelo: Slip kwiflange, ekwabizwa ngokuba yi-SO flange. Luhlobo lwesilayidi esisangqa phezu kombhobho uyilo lwangaphakathi lukhulu kancinci kunombhobho. Kuba ububanzi bangaphakathi kwesitshixo bukhulu kancinane kunobubanzi bangaphandle kumbhobho, i-SO esisangqa sinokudityaniswa ngokuthe ngqo kwizixhobo okanye kumbhobho nge-fillet weld phezulu nasezantsi kwe-flange. Isetyenziselwa ukufaka umbhobho kumngxunya ongaphakathi weflange.
I-flange ye-SO inokwahlulwa ibe yi-SO welding plate flange kunye ne-SO welding hubbed flange flange. Iimpawu zayo zoomatshini ziphakathi kwesitshixo esidibeneyo kunye nesitshixo esitshixwayo. Isakhiwo silula, kwaye ukuqhubekeka kulula. Ke isilayidi esinyibilikisayo sisetyenziswa ngokubanzi kwimibhobho emitsha yolwelo.
Kuxhomekeka kubuso obahlukeneyo, kukwakho uluhlu lwendawo ephakanyisiweyo yobuso kunye nohlobo lwendandatho yobuso obuhlangeneyo.
Izibonelelo zokutyibilika kwiFlange
Iindleko zokufaka ezisezantsi
Kulula ngakumbi ukulungelelanisa namanye amalungu ngexesha lofakelo
Welding yangaphakathi nangaphandle esisangqa
Kuthatha ixesha elincinci ukusika ngokuchanekileyo imibhobho
Njengezilayidi zombhobho esisangqa, iyahambelana nehabhu esezantsi kwisiliphu esisangqa
Iimitha zesikwere eziyi-18000
I-WN, SO, BL, PL, FLANGE
Kugqityiwe ukugcinwa kwemveliso, iimveliso zonikezelo, izinto ezingafunekiyo, ukwenza umzi-mveliso,
Ukubonelela ngemveliso eluncedo, ukukhuthaza okugqwesileyo inkonzo
Oomatshini bobunjineli, oomatshini bam, izixhobo zesikhululo samandla, oomatshini bokukhusela indalo
Egqithileyo Plate esisangqa
Okulandelayo: Socket weleing esisangqa